3 Matipi eVashambadzi Kuchengetedza yavo Yemagariro Media Mapasipoti | Martech Zone
Kwesvondo rapfuura, tanga tichiedza kutsvaga password yevatengi Youtube account. Hapana chimwe chinhu chinowedzera uye chinopambadza nguva yemunhu wese pane kuita izvi. Dambudziko raive rekuti mushandi aingobata account akangoerekana asiya kambani - uye kwete pane zvakanakira mazwi. Takaita zvese zvatinogona semurevereri kuyedza kutora password, asi vakati havachaziva kuti chaive chii zvakare.
Ehezve, Google haibatsire zvakanyanya kubvunza mibvunzo yekuongorora senge mwedzi uye gore rawakavhura account, mubvunzo wepachivande (wemushandi uyo asisipo) uyezve kupa kuti utumirezve meseji… kukambani land line iyo haigone kuvagamuchira.
Zvirinani tinoziva kuti account yakachengeteka uye haisi kuwanikwa. Chakaipisisa-chiitiko chingave account yakapaza uko pasina nzira dzekuidzorera pasi pechiratidzo chechiratidzo. Kuvimba ndicho chinhu chakakoshesesa chechero chekutengesa pamhepo, saka kuona zita richitsemurwa kunogona kukanganisa zvakanyanya. Izvo hazvina kukwana kungozvipembedza futi - iwe unofanirwa kushanda kuzvidzivirira. Hedzino nhatu nzira dzatinokurudzira kudzivirira kudzivirira ako maakaunzi ekushambadzira:
Shandisa Nhare Yekusimbisa - Yekusimbisa nhare kana Kuongorora kwechipiri-nhanho iripo pane angangoita makuru masocial site (Twitter, Facebook, Google, LinkedIn). Chaizvoizvo, kana iwe ukapinda kubva kuchinhu chitsva (kana dzimwe nguva chero chinhu), unotumirwa imwe kodhi kuti usimbise kuburikidza nemeseji kana email. Mune mamwe mazwi, kuti mumwe munhu achinje kana kubvarura password yako pasocial account, vangangodawo kuwana nharembozha inoshandiswa pakusimbisa. Ndinoishandisa kwese kwandinogona. Kana iwe uine vanhu vanoverengeka vachisimbisa kuaccount imwe chete, ikozvino une munhu wepakati anoziviswa futi.
Shandisa Chechitatu Party Enterprise Apps - Dzivisa kugovera password yako kuvashandi kana maagency zvachose uchishandisa yechitatu bato kunyorera kuaccount. Tinoda Hootsuite. Nenzira iyi tinogona kuwedzera uye kubvisa vashandisi zviri nyore kubva kuaccount, kana kuwana mukana kune account yevatengi, tisingazive password yavo kana kupa yedu. Kana ivo neimwe nzira vobira yako yechitatu-bato account, zvirinani ivo havagone hi-jack yako yekutanga social account! Iwe unogona zvakare kazhinji kutarisa pasi kupindira kuri nyore kune munhu akaiburitsa uye kubvisa account yavo nyore. Youtube chaizvo ine kugona kwemaneja, sezvinoita Facebook yeBhizinesi. Kana mushandi kana vamiriri vakasiya… ingovasiya kubva pane yekuwana runyorwa.
Shandisa Password Manager - Kushandisa chishandiso kubata mapassword hakusi kungoita kuti zvive nyore kupinda, ndezvekushandisa mapassword akasimba, mapassword akasiyana pese sevhisi uye nekuchinjisa rimwe nerimwe rawo kazhinji. Tinoda Dashlane uye nekuikurudzira zvakanyanya - vane browser yebrowser, nharembozha, uye makuru maficha. Ivo vachatogadzira yako password kusarudzwa (kana kusarudza imwe yako). Isu tinonyanya kuda kugona kwekugovana mapassword emawebhusaiti ane mashoma mukana. Mushandisi anogona kupinda achishandisa chikuva chaDashlane asi haakwanise kunyatsoona password.
Kurasikirwa nekuwana maakaundi enhau enhau kunonyadzisa uye musoro usingakoshi zvisinei nekuti wakabiwa here kana mushandi akarega, kana kudzingwa basa kana kudzingwa basa. Iyo nguva, kushanda nesimba, uye kushungurudzika kuyedza kudzosera account yako pasi pekutonga hazvina kukodzera kuisa njodzi kugovera mapassword ari nyore mukati nekunze. Dzivisa kuita kuti zvive nyore nekushandisa mamaneja epassword, mbiri-chinhu chechokwadi, uye kugona bhizinesi.
Tags: dashlanehootsuitepasswordschibatisopasocial media mapassword